Xiaomi Mi Xusuusin 10 - Dareenkeenii ugu horreeyay (VIDEO) | Androidsis
Xiaomi Mi Note 10 - Dareenkeenii ugu horreeyay (VIDEO)
Miguel Hernandez | | Mobiles, Noticias, Reviews, Xiaomi
Xiaomi waxay ku sii socotaa mashiinka guntiga buuxa si ay u bilaabaan aaladaha. Dhowr bilood ka hor waxaan go aansaday inaan dib u cusbooneysiiyo miisaanka 'Mi Note' oo la dhigay meel aad u dheer. Isticmaalayaashu waxay dalbadeen war, iyo haddii wax Xiaomi gaar ahaan jecel yahay ay soo saaraan taleefannada midba midka kale, waxay u muuqataa in warshadeedu aysan ku dhammaan hal shey oo ay mar hore ku bilaabaan midka kale.
Heerka cajiibka ah ee cusbooneysiinta iyo wararka ka imanaya Xiaomi ayaa ka dhigtay Xiaomi Mi Note 10 cusub inay gaarto miiska falanqeynta, Waxaan kuu soo qaadaneynaa sanduuqa iyo aragtidayada ugu horeysa ee qalab lagu meeleeyay qiime aad u wanaagsan oo lacag ah.
Goor dambe ayaa ka wanaagsan sidii hore, sida ay yiraahdaan. Kiiskan Waxaan si weyn kugula talinayaa inaad dhex marto fiidiyaha hogaaminaya qodobkaan maxaa yeelay sidaas ayaad ku arki kartaa sanduuqa qalab dhameystiran oo waxaad ka caawin doontaa bulshada Androidsis inay sii wadaan inay koraan, xusuusnow inaad is qorto oo aad nooga tagto wax weyn oo lamid ah.
Haddii dhanka kale horey loo go'aansaday, xusuusnow taas waxaad ka iibsan kartaa Xiaomi Mi Note 10 gudaha LINKAN qiimaha ugu fiican iyo dammaanadda Amazon. Sidoo kale waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah.
1 Naqshadeynta iyo soo saarista qalabka
2 Faahfaahinta farsamada
3 Shaashad wanaagsan iyo sound Dhawaaq wanaagsan?
4 Batariga AMAZING iyo waxyaabo kaloo badan
5 Wax badan in lagu falanqeeyo kaamirooyinka
Naqshadeynta iyo soo saarista qalabka
Dareenkeena ugu horeeya waxaan marwalba jecel nahay inaan ahmiyad gaar ah siino qaabeynta, maadaama ay tahay waxa badan indhaheena soo gala. Sida naqshadeynta, Xiaomi waxaa ka go'an inay sii wado khadkeeda caadiga ah. Waxaan leenahay aagga sare iyo hoose oo siman laakiin qallooc yar oo dhinacyada dambe ah, oo gebi ahaanba laga sameeyay muraayad isla markaana leh mudnaan gaar ah oo aan ka yarayn shan dareemayaal oo aan gadaal ka hadli doonno. Tani waxay qabataa Gaar ahaan raaxo leh gacanta, gaar ahaan haddii aan tixgelinno in ay qaro weyn tahay oo culus tahay qaybo siman.
Cabirrada: X x 157,8 74,2 9,67 mm
Miisaanka: Gram 208
Miisaankaas iyo cabirkaas ayaa leh dhowr sababood, tan koowaad waa baterigeeda weyn, tan labaadna waa hubaal inay leedahay guddi ku dhow 6,5 inji. Waxaan ku haynaa 3,5mm Jack dusha hoose, halkaas oo aan sidoo kale ka helno dekedda USB-C. Xaqiiqdii waa rafcaan-qaadis faraha, sida had iyo jeer dhacda aaladaha muraayadaha, taas oo ah mid aan laga fursan karin. Sikastaba, xirmada waxaa kujira jel daboolan, oo caan ku ah astaanta, taas oo naga caawin doonta inaan ilaalino. Waxa aan heli doonin waa filim ilaaliya shaashadda oo aan ahayn dhagaha, waa dhaqdhaqaaq sii kordhaya oo caan ku ah dhammaan noocyada. Heerka heerka fududaynta iyo raaxada.
Qoraalkan Xiaomi Mi Note 10 kama dhinna wax heer farsamo ah, halkaasoo cusbooneysiintu ka muuqato 730nm Snapdragon 8G waxaa sameeyay Qualcomm iyada oo leh waxqabad dhexdhexaad dheeri ah oo la xaqiijiyay, gaar ahaan heerka qaboojinta iyo isticmaalka.
Shaashadda: 6,47-inch AMOLED oo leh xallinta 1080 x 2340 pixels
Kaydinta gudaha: 128 GB UFS 2.1
Kaamirada gadaal: 108 MP Samsung ISOCELL Bright HMX shidma weyn + 20 MP shidma balaaran + 2 MP 12x telephoto + 5 MP 5x telephoto + 2 MP macro sensor
Kaameradda hore: 32 MP
Battery: 5.260 mAh oo leh 30 W lacag degdeg ah
Xiriirinta: Dual SIM, 4G / LTE, WiFi 802.11 a / c, GPS, GLONASS, Bluetooth, USB-C, 3.5 mm jaakada dhagaha, raadiyaha FM
Kale: Qalabka sawirka faraha ee shaashadda hoostiisa, NFC, emitter infrared
Nidaamka Howlgalka: Android 9 Pie oo leh MIUI 11
Lasocod 6GB oo ah LPDDR4 RAM leh xawaare wanaagsan, isla taas ayaan ka dhihi karnaa kuwooda 128GB oo keyd ah oo leh tikniyoolajiyadda UFS 2.1 iyada oo aan noqon ugubkii ugu dambeeyay, waxay bixisaa waxqabad in adeegsigayagii ugu horreeyay uu ahaa mid aad loogu qancay. Ma jiraan wax lagu canaanto qaybtan iyada oo la tixgelinayo qiimaha (Imika iibso hada).
Shaashad wanaagsan iyo sound Dhawaaq wanaagsan?
Guddigan AMOLED, Xiaomi kuma dhicin, waxaan kaheleynaa dhalaal sare iyo isugeyn wanaagsan, wax caan ku ah astaanta. Waxaan leenahay guddi AMOLED ah oo ah 6,47-inch inch ah xalka 1080 x 2340 pixels (Full HD +). Waxaan ku soo aragnay karti aad u fiican qorraxda oo buuxda. Dhinacyadeeda qalooca ma faro-gelinayaan isticmaalka maalin-ka-maalin, in kasta oo aan ka helnay aberro chromatic u ah. Dhiniciisa midabbada sifiican ayuu u tarmiyaa, waa inaan dhahaa waa mid kamid ah qaybaha aan aad ujeclahay.
Codku waa dhinaca kale. Ma hayno (ama kumaanan helin shaqada) dhawaaq sitiriyo ah. Hadalka hoose waa ku filan yahay mug ahaan, laakiin waxaa ka maqan baass muuqda iyo badhtamaha gebi ahaanba. Waxay u dhigantaa dhadhan fiican oo afkaaga kujira oo shaashada quruxda badani kaa tagtaa, taas oo aan xasuusano, waxay ka sarreysaa 87% wadarta isticmaalka.
Batariga AMAZING iyo waxyaabo kaloo badan
Waxaan leenahay batari ah 5.260 Mah wax intaa dhaafsiisan iyo wax ka yarba, horeba waad u ogtahay sababta dhumucda iyo culayska. Waxaan ku dalaci karnaa adabtarada kujira xirmada ilaa - 30W iyada oo loo marayo USB-C, laakiin waa inaan taas xasuusnaano nasiib daro waxaa ka maqan ku-dallaca wireless.
Shaki la'aan batterigu waa mid ka mid ah qodobadiisa ugu xoogan, aragtiyaheena ugu horeysa natiijadu waxay noqoneysaa mid layaableh, mid ka mid ah meelaha ugu fiican bartanka ereyadaan aan wajahnay. Waxba kama maqna heerka isku xirnaanta midkoodna, waxaan haysannaa NFC, wax badanaa ka maqan aaladaha sidan oo kale ah. Intaa waxaa sii dheer, waxqabadka WiFi, xitaa iyada oo loo yaqaan '5 GHz band', ayaa si gaar ah ugu fiicnaa tijaabooyinkeenna.
The Miyuu Xiaomi Mi Note 10 ku qancinayaa? Waa hagaag gujinaya halkan waxaad ku haysaa qiimaha ugu fiican.
Wax badan in lagu falanqeeyo kaamirooyinka
Waxaan haynaa shan dareemayaal oo dhabarka ah, wax intaa ka badan iyo wax kayarba ma jiraan, waxaanna xusuusan nahay in Xiaomi ay halkan ku qaadanayso 108MP
108 MP (1 / 1,33 ”) f / 1.69, 7P, 82 ° - AF, Super Pixel, OIS
12 MP telephoto 2x, f / 2.0, 6P
5 MP 5x telephoto, f / 2.0 - OIS
20 MP xagal ballaaran oo ballaaran 117º, f / 2.2
Toddobaadka soo socda waxaan sameyn doonaa tijaabo dhammaystiran oo ku saabsan dareemayaasha dambe, gaar ahaan duubista iyo xasilinta. Ma iloobi doonno dareenkaaga Kaamirada hore ee 32MP si aad ugu muujisid waxyaabo badan oo sawiro ah. Taasi waa sababta aan kuu xusuusineyno in usbuuc gudihiis aan halkaan la imaan doonno dib u eegista qotoda dheer, sidaa darteed waa wakhti fiican oo aan ku biirno kanaalkayaga YouTube-ka oo aan ka faa'iideysanno fursadda aan ku dhaqaajino ogeysiisyada, maxaa yeelay waxaan hubnaa inaadan rabto inaad seegto
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi Note 10 - Dareenkeenii ugu horreeyay (VIDEO)